May 16, 2021 Xuseen 1
Wabiga Shabeelle ayaa waxaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay uu Go’doon galiyey magaalada Jowhar ee xarunta Maamulka Hir-Shabeelle, sida ay sheegeen masuuliyiin katirsan Maamulkaas oo ku sugan magaalada Jowhar.
Wasiirka gar gaarka maareeynta iyo masiibooyinka Maamulka Hir-Shabeelle, Cabdi Mahad Cabdullaahi Qoorgaab, ayaa sheegay in Magaalada jowhar ay ku sugantahay xaalad adag kadib fatahaada Wabiga oo jaray dhamaan wadooyinkii soo galayey Magaalada.
Wasiir Cabdi Mahad Cabdullaahi Qoorgaab, oo la hadlay idaacadda Voa-da laanteeda Afka Soomaaliga ayaa sidoo kale tilmaamay in in kabada 40kun oo Qoys ay ku barakaceen fatahaada, isla markaana wali dhibaatadu ay tahay mid taagan.
Dhawaan Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe ayaa sheegay in xaalad dag ay kajirto Magaalada Jowhar, isla markaana loo baahan yahay in si deg deg ah loogu soo gurmado Bulshada ku nool Magaalada.
Biyo xooggan ayaa fariistay dhammaan waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Jowhar, waxaana maalmihii la soo dhaafay Magaalada Jowhar aan gelin wax Gaadiid ah kana soo bixin, iyada oo maciishada noocyadeeda kala duwan ay aad u qaaliyoowday.
Lacagtii la idin ku taageeray ee muusida webiga soo fatahmay, oo dhameeed USD35 Million, waxaa idin ka xirtay XAAR FAMAAJO…
Mr. GUUDLAAWE, waxba dadka ha nacableen, ka soo qaad lacagta aad ugu deeqday XAAR FARMAAJO, oo ha lagu isticmaalo lacagta USD35 million meeshii loogu talagalay.